मेगा बैंकको १८ लाख कित्ता शेयर बिक्री खुल्ला…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
मेगा बैंकको १८ लाख कित्ता शेयर बिक्री खुल्ला…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं, ४ असोज । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले १८ लाख कित्ता शेयर लिलामीमा बिक्री गर्न गोप्य शिलबन्दी आव्हान गरेको छ । मेगा बैंकले संस्थापक समूहतर्फको ११ लाख ३३ हजार ३ सय ४४ दशमलव ७० कित्ता र सर्वसाधारण
समूहतर्फको ७ लाख ७ हजार ३ सय ९४ दशमलव ९३ कित्ता गरी १८ लाख ४० हजार ७ सय ३९ दशमलव ६३ कित्ता शेयर गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रबाट बिक्री गर्न लागेको हो ।
सर्वसाधारणहरुले असोज १८ गतेभित्र आफूले खरिद गर्न चाहेको प्रतिकित्ता शेयर र दररेट खुलाई गोप्य शिलबन्दीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
त्यसका लागि न्यूनतम १ सय रुपैया र त्यस भन्दा बढी कतिमा शेयर खरिद गर्न चाहेको हो स्पष्ट खुलाई बोलकबोल आवेदन दिनुपर्ने मेगा बैंकले जनाएको छ । उपत्यका भित्र मेगा बैंकको कमलादीस्थित मुख्य कार्यालय, नयाँ बानेश्वर चोक, ठमेल, न्यूरोड (पिपलबोट), ज्ञानेश्वर, चावहिल, बौद्ध, ।
कलंकी, गोंगबु, महाराजगञ्ज, मैतीदेवी, जावलाखेल, पुरानो ठिमी र सूर्यविनायक शाखाबाट सर्वसाधारणहरुले शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाबाहिर धनगढी, वीरेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, तुल्सीपुर, भैरहवा, बुटवल, अर्घाखाँची, तम्घास, तानसेन, नारायणगढ, पोखराको सभागृह चोक र चिप्लेढुंगा, हेटौंडा, वीरगञ्ज,
सिन्धुली, जनकपुर, धरान, विराटनगर र विर्तामोड शाखाबाट शेयर खरिदका लागि आवेदन दिने व्यवस्था मिलाइएको मेगा बैंकले जनाएको छ । यसैगरी, अनलाइनबाट फारम लिई शेयर आवेदन गर्न इच्छुक आवेदनकर्ताहरुले मेगा बैंक वा मेगा क्यापिटल मार्केटस लिमिटेडबाट छाप प्रमाणित गरी आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मेगा बैंकले २०७४ साल भदौ २७ गतेदेखि कात्तिक १४ गतेसम्म हदप्रद शेयरको बिक्री खुल्ला गरी आवेदन माग गरेको थियो । तर, त्यतिबेला संस्थापक तथा सर्वसाधारण समूहतर्फका शेयरहरुका लागि आवश्यक आवेदन नपरेकाले ती शेयरहरु अहिले बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्न लागिएको मेगा बैंकले जनाएको छ ।
Prev८१ वर्ष पुग्दा पनि घाँसखेती गर्दै टेक बहादुर, कमाउछन् वार्षिक ४ लाख…हेर्नुहोस् । सेयर गरौ !
Nextन स्यानिटाइजर न दुरी, भाडा मात्र बढी अनि कसरी हुन्छ कोरोना नियन्त्रण ?
हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, सोलुखुम्बुमा ज्ञानेन्द्र शाहीको अभियान बिस्तार…हेर्नुहोस् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बन्दै…हेर्नुहोस् ।
एन्फा आपत्कालीन बैठक, तासीलाई फर्काउने
म हामारीमा को रोना किट किन्न छाडेर सरकारले एक अर्बका ह तियार किन्यो, हजुरहरु गाली दिनु हुन्छ कि ताली ?
न्युरोडमा खुकुरी देखाएर आईएमई लुटपाट (2821)
अर्काको घरभित्र मध्यरात पसेको चोर बिहानसम्म पनि यस कारण भागेन (2004)
विद्यालय, सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गरिने ! (1628)
गर्मी मौसममा चुकन्दरका ८ फाइदा (1319)
कुलमान बारे भोलि निर्णय हुने…कुलमान नै नियुक्ति हुनुपर्छ भन्नेहरूले सक्दो सेयर गर्नुहोस् । (1307)
पत्थरीको लागी घरायसी औषधी आफ्नै घर मा यस्तो छ, प्रयोग गर्ने तरिका सहित । (1285)
दुबईमा नग्न फोटोसुट, ११ महिला प’क्राउ (921)
वायु प्रदूषणले आँखाको ज्योतिसम्म गुम्ने खतरा (906)
पेरिसडाँडाको बैठक सम्पन्न : एमाले र माओवादी अलग-अलग भएर जाने निर्णय (887)
मुला खाएपछि भुलेर पनि यी चीज नखानुहाेस् । पछुताउनु पर्ला ! (864)
तपाईंको आँखाबाट आँशु नै आएन भने के होला ? यसबारे जानाैँ
ग्या’स्ट्रिकको स’मस्या हुने व्यक्तिले भूलेर पनि नखानुहो’स् केरा, नत्र निम्तिनसक्छ यस्तो ख’तरा
कोरियाबाट गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालालाई ४ लाख ५० हजार सहयोग
घर जान हिँडेकासँग चर्को भाडा असुल्ने गोंगबुबाट प’क्राउ
उपाय छिट्टै क’पाल लामो र बा’क्लो बनाउन चा’हनुहुन्छ ? प्रयोग गर्नुहो’स् यी घरेलु उ’पाय